Les protestantismes .
MAHAY MITANTANA KRIZY
Tsy ilaozan’ny Krizy ny fiainan’ny toeram-piasana, indrindra rehefa mandalo fotoan-tsarotra izy. Betsaka ny miraviravy tanana, ao ny manatobaka fanomezan-tsiny ranofotsiny, tsy vitsy ny mandositra andraikitra, ary tsy ilaozan’olona te handrehitra ady koa izany fotoanan’ny Krizy izany. Ilana fahaiza-mitantana anefa ny Krizy, tahaka ny toe-javatra rehetra. Satria Tetezamita hiampitana any amin’ny vanim-potoana vaovao ny fivoahana tsara avy amin’izany. Inona ary ireo zavatra atao mandritra ny fitantanana ny Krizy ?
NY ATAO HOE KRIZY
Ny teny grika « KRISIS », izay nadika ho Krizy, dia fanapahankevitra manoloana ny zavatra roa mety hitranga. Io Fanapahankevitra io no takin’ny Krizy, azy izay ihany. Inona ny Fanapahankevitra horaisina manoloana ny toe-javatra iray hafa noho izay tokony hiseho ?
Ny sehatry ny fitsaboana no tena niandohan’ny Krizy na aretina mitranga, ka ilana Fanapahankevitra maika sy haingana ary mahomby. Atao hoe tafavoaka ny Krizy ny toeram-piasana, rehefa miverina amin’ny laoniny (toe-javatra mahazatra) indray ny fiainany ao.
RAFITRA MITANTANA NY KRIZY
Raha tiana ny hahay mitantana ny Krizy, dia misy Rafitra mitantana azy, atao hoe « cellule de crise ». Vokatra haingana sy maika mantsy no tadiavina rehefa vanim-potoanan’ny Krizy, ka tsy maintsy mihetsika mafy sy haingana koa io Rafitra io. Tsy fianarana asa, araka izany, no atao, fa fitondrana fahaizana efa masaka sy traikefa.
Olona hiaina anaty fanerena hatrany izay hitantana krizy, ka ny « stress » na raritsaina no sakaiza tsy mahafoy azy mandritra io vanim-potoana io. Amin’izany, dia tsy hanana zo ho diso mihitsy ny mpitantana Krizy, na amin’ny fandraisana fanapahankevitra, na amin’ny fampitam-baovao. Tena zavatra tsy azo ivalozana mihitsy ny fahadisoana mety hataon’ny mpitantana anaty Krizy.
Andeha hotanisaina tsotra ary izay zavatra mety hataon’ny mpitantana Krizy.
Mamantatra ny fiandohan’ny Krizy sy ny fivoarany, ary ny mety ho fiantraikany.
Mamaritra ny zavatra hotratrarina sy ny Paikady mifanaraka amin’izany.
Mitsinjo mialoha izay zavatra mety hiseho, ho fisorohana na ho famahana izany.
Mandrindra ireo asa rehetra miandry.
Manetsika ireo manam-pahaizana isan-tokony ho fahombiazan’ny fitantanana Krizy.
Mahay mampitony ny olona amin’ny fampitam-baovao mahomby, sy ny toetra tony hatrany.
Mila mahazo vaovao tsara sy ara-potoana ny olona ao anaty toeram-piasana, fa tsy ny haino aman-jery indray no ahazoany izany. Manimba ny fitokisana azy izany, satria toy ny olona hafa ivelan’ny toeram-piasana, « tompony mangataka atiny ». Ho mafy kokoa ny firaisankina sy ny fifampitokisana ary ny fahavitrihan’ny rehetra, rehefa mahazo vaovao tsara sy ara-potoana ny olona.
Ankoatra ny ao anatiny, dia ilaina tsara koa ny mahay mampita vaovao ho an’ny any ivelany, izay sary tsara (image) ahitan’ny hafa ny toeram-piasana. Eo ny mpiara-miasa any ivelany, ny fahefana ara-panjakana, ny haino aman-jery, sns. Rehefa simbain’ny any ivelany ny « sary » ahafantarana ny toeram-piasana, dia sarotra ny manavotra azy.
Vendredi 10 Avril 2020 - 2:12:57